Xaaladda deegaanka Dhag-tuur ee gobolka Mudug oo deggan iyo khasaaraha labada dhinac oo sii kordhaya. – Radio Daljir
Dhag-tuur, July 04 – Waxaa aad u sii kordhay tirada dhimasho iyo midda dhaawac ee ka dhallatay dagaal shalay ka dhacay deegaanka Dhag-tuur oo ka tirsan gobolka Mudug una dhaxeeyey meellayshiyaad ku kala abtirsada maamullada Galmudug iyo Ximin iyo Xeeb.
Dagaalkaan oo shalay aroortii ka bilawday dhawr goobood oo aad iskugu dhaw kana tirsan deegaanka Dhag-tuur ayaa haatan la tilmaamayaa tirada dhimashadu in ay kor u dhaaftay 25 ruur halka dad ka badan 40 kalena ay dhaawacyo soo gaaray la ildaran yihiin kuwaasi oo iskugu jira meellayshiyaadkii labada dhinac.
Xaaladda ayaa haatan la tilmaamayaa in ay deggan tahay lagana dhex-wado labada garab waan-waan aan caga badan ku tagnayn iyadoo aan wali lagu guulaysan in si rasmi ah loo kala qaadoo labada ciidan ee dirirtu ay dhex-martay.
Guddoomiyaha guddi loo xilsaaray dhex-dhexaadinta labadaasi beelood ee colaaddu u dhexayso oo maanta u warramay raadyaha Daljir Bashiir Warsame Cawaale ayaa sheegay in ay wali wadaan dadaalladoodii nabad-raadineed inkastoo uu niyad xumo ka muujiyey halka arrintu haatan gaartay.
Guddoomiyuhu, waxaa uu sheegay dadaalladii ay horay u sameeyeen in ay ahaayeen kuwo najaxay wax-badanna ka hirgaleen, hase ahaatee waxaa uu sheegay in ay fashiliyeen dagaalladii shalay dhacay isagoo carrabka ku adkeeyey jiritaanka gacmo ka baxsan beelaha diriray oo xaaladda gadaal ka soo riixaya.
Colaadda labadaaan beelood ayaa ka soo asaasantay kala sheegasho xogga daaqa, deegaanka iyo biyaha ah taasoo markii dambana isku baddashay dirir kafool-ka fool ah.